WhatsApp ga-ekwe ka ozi na-ebibi onwe n'ime awa 24 | Gam akporosis
Ọ bụrụ na ụnyaahụ anyị maara nke ahụ WhatsApp ga-emesị zoo encryption nke mkparịta ụka anyị, anyị maara ugbu a na ọ ga-abụ anwale izipu ozi na-apụ n'anya mgbe awa 24 gachara.
una ịbịakwute ihe na-eme Snapchat kere n'oge ya nakwa na anyị ahụwo na Ọktọba nke afọ gara aga n'otu WhatsApp ahụ na ozi nwa oge.
Ma ọ gaghị abụ naanị ihe nwere ike "ibibi onwe ya" mana ha bukwa n'uche na onyogho ndị anyị kesara na nkata otu, mgbe anyị hapụrụ ya, ga-apụ n'anya. A usoro omume iji na nzuzo ebe anyi enweghi otutu onyonyo na nchekwa ekwenti dika anyi kesara.
Banyere ozi ndị na-apụ n'anya mgbe awa 24 gachara, n'ezie, ọzọ WABetaInfo bipụtara na akaụntụ Twitter ya na ngwa izipu ozi Aga m anwale ụdị ozi ndị a na-ebibi onwe ha. Ugbu a anyị nwere ozi nwa oge na ụbọchị 7, mana ọ dị ka ọ bụ ogologo oge maka ụfọdụ, yabụ ngwa ahụ ga-enye nhọrọ ndị ọzọ dị ka nke a.
WhatsApp na-anwale ikike ịtọ ozi ga-apụ n'anya mgbe awa 24 gachara.
Ọ ga-arụ ọrụ maka ozi nkata nke ọ bụla na ndị anyị na-eziga na otu; N'adịghị ka o kwe omume na a na-ehichapụ ihe oyiyi ahụ na-akpaghị aka mgbe anyị hapụrụ otu nkata. Na site n'ụzọ, ndị a enweghị ike "wepu" na ngwa ahụ, agbanyeghị na ọ pụtaghị na ụfọdụ amamihe na - ewe nseta ihuenyo iji "zuo ohi" ya.
Anyị amaghị ụbọchị mbata maka ozi ndị na-emebi onwe ha n'ime awa 24, yana arụmọrụ nke onyonyo ga-apụ na mkparịta ụka otu ahụ ozugbo anyị hapụrụ ya. Bụrụ na ọ nwere ike, ha na-arụ ọrụ na ya site na beta ọwa na mpaghara ụfọdụ na ndị ọrụ, yabụ n'oge a ka anyị mara na anyị nwere ozi na WhatsApp na-ebibi onwe ya na 24 awa, anyị ga-amara gị ọkwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Whatsapp » WhatsApp ga-enye gị ohere izipu ozi na-ebibi onwe gị n'ime awa 24
Nibble ... haha ​​.. ihe hacker ... na ihe arụ n’ezighi ezi iji mebie ozi onwe ya ... Ọ bụrụ na ọ bụ nkeonwe, ekesala ya maka diossss ...
Ha nwere ike inyeworị WhatsApp ihu ihu, kwe ka nhazi, gbanwee agba, na a ga-echekwa nkata na igwe ojii ma ọ bụrụ na ị gbanwee ekwentị (dịka telegram) na ọrụ bara uru ... enweghị ozi agaghị ekwe omume. Na agbanyeghị…
Zaghachi iji hummer
Top 12 Apps gosiputa PDF Documents na gam akporo